DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo ka digay Halista Gumeysi cusub – XAMAR POST
Isagoo khudbad xalay ujeedinayey Ka qeyb galayaasha Munaasabad ka dhacday Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya laguna maamuusayey Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May & Halgankii Leegada SYL ayuu Madaxweyne Farmaajo kaga hadlay arimo dhowr ah.
Madaxweynaha ayaa dul-istaagay hagardaamooyinkii gumaystuhu uu u gaystay Ummadda Soomaaliyeed isaga oo sheegay in waddaniyadda ay lahaayeen Ururkii Gobanimo Doonkii SYL ay kala tallaabeen caqabado iyo jallaafooyin waawayn oo dalka lala damacsanaa,taas mid la mid ahna ay Soomaaliya wajihi karto hadii isku duubni looga gudbin.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa ku baaqay in dhalinyarada qeyb ka noqdaan dib udhiska dalka intii ay bur burintiisa loo adeegsan lahaa,Dawladnimadana taageero unoqdaan.
Hadalka Madaxweyne farmaajo ayaa kusoo beegmaya xilli ay Dawlada dhowr jeer Dalal shisheeye ku eedeysay inay fara gelin ku hayaan Arimaha gudaha Soomaaliya.
Muwaadin Soomaaliyeed oo Xukun 146 Sano xabsi lagu riday